I-China Waveguide Rotary Joints yoMvelisi kunye noMthengisi | AOOD
Amalungu ajikelezayo ajikelezayo avumela ukuhanjiswa kwe-microwave ukusuka kwiqonga elimileyo ukuya kuma-360˚ ajikelezayo amaza oxande oxande, elona qondo liphezulu ukuya kuthi ga kwi-94Ghz. Banokuphatha amandla amakhulu kwaye banokuncitshiswa okuncinci kunamajoyina ajikelezayo e-coaxial, ngakumbi emva kokudlula kumatyeli athile, izibonelelo ezibini zamalungu ajikelezayo ajikelezayo zibonakala kakhulu. I-AOOD ibonelela ngeyunithi enye yokuhanjiswa kwamaza kunye nokudityaniswa kwamaza kunye neeyunithi ze-coaxial. Ezi yunithi zinokusetyenziselwa amakhonkco esiliphu sombane ukubonelela ngeguwaguide, amandla coaxial kunye nokuhanjiswa kwedatha kunye. Izicelo eziqhelekileyo zibandakanya iiradar, satellite kunye neenkqubo ze-eriyali zeselfowuni njl.
Umzekelo Inani leShaneli Range rhoqo Incopho yamandla OD x L (mm)
Idilesi ye-ADSR-RW01 1 13.75 - 14.5 GHz I-5.0 kW 46 x 64
Inkcazo: ADSR-1W141R2 2 0 - 14 Ghz I-10.0 kW 29 x 84.13
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weFibre Rotary Joint-Capsule Slip Rings-AOOD
Okulandelayo: Aerospace zomkhosi zelanga Imisesane
I-Coax Rotary ngokudibeneyo
AmaJelo eeRotary Rotary
Rf Rotary ngokudibeneyo